Ra’iisul wasaare Kheyre oo furay imtixaannaadka Dugsiyada sare ee dalka (Sawirro) | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaare Kheyre oo furay imtixaannaadka Dugsiyada sare ee dalka (Sawirro)
Ra’iisul wasaare Kheyre oo furay imtixaannaadka Dugsiyada sare ee dalka (Sawirro)
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, mudane Xasan Cali Kheyre ayaa furay Imtixaannaadka dugsiyada sare oo la mideeyey, waxaana wehliyey wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka socotay hey’adaha waxbarasho ee dalka.
Ra’iisul wasaaraha xukumadda Federaalka Soomaaliya oo dugsiga 15 May ee degmada Warta nabadda oo kamid ah meelaha imtixaanka lagu qaadayo booqdey ayaa dhammaan mid mid u salaamay ardayda ka qayb galaysa imtixaanka, isagoo ku dhiri galinayey in ay ka dhabeyaan hadafka ah in ay ku guuleystaan imtixaanka iyo guud ahaan waxbarashada.
Wasiirka waxbarashadda ee xukumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashadda ay sharaf weyn u tahay qaadista imtixaankaan mideysan, isla markaana ay rajeyneyso in ay ku dhammaadaan si hufan oo nabad ah.
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali kheyre, oo la hadlay ardayga galisa imxitaanka ayaa xusay in ay ardaydani ay tusaale u yihiin in dalkeenu uu leeyahay mustaqbal wanaagsan wax barashadduna ya horseed u tahay horumarka dalka.
“maanta waa maalin ahmiyad gaar ah u leh shacabka Soomaaliyeed, maadaama 27, kun oo ardey Soomaaliyeed ay u fariisanayaan imtixaannaadka dugsiyada sare oo ay wasaaradda waxbashada Xumuumadda mideysay, taas waa guul weyn, wax badanna ka tari doonta tayada waxbarashad dalka, annaga Xukuumad ahaan waxaa naga go’an sidii aan ugu dedaali lahayn kordhinta iyo tayeentada waxbarashada heerarkeeda kala duwan” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha dalka.
Sidoo kale, imtixaanka dugsiga sare ayaa maanta ka bilowday magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Beledweyne, Cadaado, Gaalkacyo iyo kuwo kale.
Previous articleWaxqabadka dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay
Next articleGuddoomiyaha golaha shacabka iyo Wasiirka Destuurka oo wakiillada beesha caalamka Nairobi kula kulmay